Hantida 'Crypto Assets' iyo 'Cryptocurrencies': Maxaan ogaan karnaa kahor intaan la isticmaalin? | Laga soo bilaabo Linux
Mar kale ayaa la iftiimiyay ama la muujiyay aqoonta bulshada adduunka mawduuca Cryptoassets, gaar ahaan midka laxiriira arinta Criptomonedas, sababtoo ah daahfurka ah Waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrency Libra' iyo iyada "Calibra Wallet" by «Ururka Miisaanka» kuwaas oo qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee tiknoolajiyada iyo ganacsiga korantada adduunka ay qayb ka yihiin, oo ay ka mid yihiin Facebook, sida dhowaan looga hadlay qoraalkeenna oo la yiraahdo: Miisaanka 'Cryptocurrency' ee ku saleysan 'Libra' oo ku saleysan shabakadda 'jeebka' digital-ka ah.
Intaa waxaa dheer, dib u soo celinta cusub ee qiimaha kii ugu horreeyay, kan ugu caansan uguna isticmaalka badan Cryptocurrency, oo loo yaqaan «Bitcoin», oo qiimaheeda maalmahan (Juun-2019) uu kudhowaad yahay 10 kun $ (USD) ayaa u xagliyay qaraxa wararka ee dunida maanta iyo mustaqbalka Cryptoassets. Maxaa ka dhigaya lagama maarmaanka in la sameeyo dhinacyo la yaqaan, shuruudo ama fikrado la xiriira Cryptoassets iyo Cryptocurrencies si loo kordhiyo guusha korsashadooda, tan iyo kuwan waxay ku saleynayaan guushooda kalsoonida iyo isticmaalka adeegsadayaashooda.
Waqtigan xaadirka ah iyo adduunka oo dhan waxaa jira heer sare oo faa'iido leh hantida crypto iyo mashaariicda loo yaqaan 'cryptocurrency' oo socda. Qaarkood waa mashaariic dhowaan iyo kuwa mustaqbalka ah konservatives kuwaas oo la jaan qaadaya hay'adaha bangiyada hadda jira ee adduunka, kuwa kale waa mashaariic duug ah oo dhowaan abwaanada taas oo ay weheliyaan ururada waaweyn iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee waaweyn iyo kuwa yaryarba, inyarna waa mashruucyo hada socda iyo kuwa soo socda xiiso leh gacanta ku haya hay'adaha dawliga ah ee dalalka qaarkood.
Taas awgeed, waa wax aad u faa'iido badan in la ogaado oo la fahmo sida ugu fiican ee suurtogalka ah inay yihiin Hantida 'Crypto Assets' iyo 'Cryptocurrencies' iyo dhammaan eraybixintooda iyo teknolojiyaddooda la xidhiidha iyaga oo ka faa'iideysanaya iyaga iyo dhammaan kuwa mar uun la casuumi karo, lagu qasbi karo oo xitaa lagu amri karo inay adeegsadaan.
1 Erey bixin iyo tiknoolajiyad la xidhiidha
1.1 Dhaqaalaha Dijitaalka ah
1.2 Teknolojiyada Maaliyadeed
1.3 Teknolojiyada Xisaabaadka loo Qaybiyey (DLT)
1.4 Teknolojiyada Blockchain
1.5 Macdanta Dijital ah
1.6 Tokens, Cryptoassets iyo cryptocurrencies
1.7 Isweydaarsiga Cryptocurrency
Erey bixin iyo tiknoolajiyad la xidhiidha
Dhaqaalaha Dijitaalka ah
Waa qayb cusub oo ganacsi oo ku jirta horumar buuxa iyo ballaadhin. Asal ahaan waxay u jeeddaa guud ahaan ganacsiga elektarooniga ah ama dijitaalka ah ee lagu sameeyo internetka iyo Technologies-ka Isgaarsiinta iyo Isgaarsiinta (ICT) si loo sameeyo loona helo badeecooyin iyo alaab cusub oo wanaagsan, badeecooyin iyo adeegyo dhowr guji ah. In kasta oo Ganacsiga Elektiroonigga ah kaliya loola jeedo xaqiiqda lafteeda, habka loo iibsado loona iibiyo alaabada qaab elektiroonig ah, sida barnaamijyada moobiilka iyo internetka.
Aaggan cusub waxay ku lug leedahay iskuna dartaa si tartiib tartiib ah iyo si xawli leh tikniyoolajiyada dhinacyada kala duwan (waxbarashada, shaqada, madadaalada, maaliyadda, ganacsiga, isgaarsiinta) si loo helo habab kale oo hufan, badbaado leh oo shaqsi ahaaneed oo loo dhan yahay.
Dhaqaalaha Dijital ah, Internetku wuxuu u adeegaa sidii barxad guud oo loogu talagalay jiilka shaqada, abuurista hodantinimada, iyo qaybinta iyo isticmaalka alaabada iyo adeegyada. Waxaas oo dhan si loo daboolo baahiyaha sii kordhaya ee bulshada maanta, bulsho farsamo ku dhisan aqoon.
Teknolojiyada Maaliyadeed, marar badan oo loo yaqaan «Maaliyadda Teknolojiyada» ama FinTech, waa fikrad magaceedu ka soo jeedo gaabinta ereyada ingiriiska "Teknolojiyada Maaliyadeed". Waxayna si gaar ah loola jeedaa dhammaan teknoolojiyadda casriga ah ee ay adeegsadaan ururada (shirkadaha, ganacsiyada iyo warshadaha), kuwa guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay, qayb kasta (maaliyad, ganacsi, tikniyoolajiyadeed iyo adeeg bulsho) si loo abuuro loona bixiyo alaabooyin cusub, alaabo iyo adeegyo
Qaar kale waxay aad u dhawraan, badiyaa waxay tixgeliyaan oo keliya sidii FinTech kaliya in shirkado ka shaqeeya dhinaca maaliyadeed oo gacan ka geysta fikradaha cusub iyo moodeellada dhaqaale iyo kuwa ganacsi iyadoo la adeegsanayo ICT-da cusub iyo tan casriga ah. Teknoolojiyadaha koobaya fikraddan waxaa ka mid ah Teknoolojiyadda Xisaabaadka loo Qaybiyay (DLT) iyo Teknolojiyada 'Blockchain' iyo 'Crypto-commerce' (Cryptoassets iyo Cryptocurrencies).
Isku soo wada duuboo, Teknolojiyada Maaliyadeed ayaa leh Ujeeddada laga leeyahay in tiknoolajiyadda ugu casrisan laga dhigo tirada ugu badan ee macaamiisha suurtagalka ah, xalka wanaagsan (alaabada ama adeegyada) maaliyadeed iyo ganacsi qaabab badan oo la heli karo, dhaqaale, hufan, baaxad leh, hufan, amni, iyo madaxbannaan.
Teknolojiyada Xisaabaadka loo Qaybiyey (DLT)
Teknoolojiyadda Ledger-ka loo qaybiyey, oo sidoo kale loo yaqaan 'DLT' oo loo soo gaabiyo ereyga "Teknoolojiyadda Ledger loo qaybiyey" Badanaa waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybta horumarinta gaarka loo leeyahay, laakiin waxaa ku jira Teknolojiyada 'Blockchain Technology', oo asal ahaan isku mid ah laakiin qaybta horumarinta dadweynaha. DLT kaliya waxaa loola jeedaa tikniyoolajiyadda qaab dhameystiran, taas oo ah, tikniyoolajiyadda ka dhigaysa macaamil macquul ah internetka sida ugu habboon iyo iyada oo aan dhex-dhexaadin laga helin, iyada oo loo sii marayo keydka macluumaadka la qeybiyay, oo dammaanad-qaadaya ka-beddel la'aanta iyo ilaalinta kriptografi ee xogta.
Ka hadalka DLT waxaa ka mid ah, fikradaha shabakadda node qaybinteeda iyo baahinta, oo loola jeedo kuwa martida loo yahay ee kaydiya nuqul ka mid ah keydka macluumaadka la isticmaalay, si looga hortago in xogta la fara-geliyo, haddii aysan jirin 51% weerar, taas oo aan ka badnayn Weerar meesha ku soo xadgudubku ku guuleysto inta badan noodhadhka, faragelinta go'aamada shabakadda, maaraynta inuu wax walba beddelo sida uu doono. Sidaas awgeed waxay jebineysaa mabda'a maamulka ee shabakadda, oo isku dayeysa inay dimuqraadiyadda ka dhigto mid isku dheellitiran ka qaybgalayaasha (node), si aysan u jirin khiyaano ama wax is daba marin dhexdooda ah.
Fikradda Blockchain waa inaan lagu qaldin DLT. Sameynta isbarbardhiga si loo fahmo labada fikradood ayaa la dhihi karaa, marka laga hadlayo lacagaha, DLT waxay noqonaysaa fikradda lafteeda «Lacagta» iyo Blockchain waxay noqonaysaa hal mid gaar ahaan, tusaale ahaan, Dollar, Euro, Ruble ama Yuan. Sida mid kasta oo ka mid ahi yahay mid ka mid ah lacagaha badan, Blockchain waa DLT. DLT waa ereyga guud, iyo Blockchain waa erey gaar ah, kaas oo lagu leeyahay caan ku noqoshada kobaca hantida crypto, gaar ahaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Marka marka laga hadlayo Blockchain, mid badanaa wuxuu tixraacayaa barxadda asalka ah ee "Bitcoin", isagoo ah kii ugu horreeyay ee la abuuray.
Teknolojiyada Blockchain, oo sidoo kale loo yaqaan 'Blockchain', oo magaceeda ku qoran Ingiriis, ayaa xusaysa taas teknolojiyad ku lug leh kala-soocidda baloogyada ku kaydiya macluumaadka shabakad dhexdeeda, waana in ayna hubiyaan adeegsadayaasheeda abuuritaankeeda ilaa dhammaadka. Iyo halka baloog kastaa ka kooban yahay tilmaame xashiish ah oo ku teedsan dhismihiisii ​​ka horreeyay, abuurista shabakad isku xiran. Blockchain sidoo kale badanaa wuxuu la xiriiraa magaca urur khaas ah oo sameeya baare sahamiya oo waliba leh isla magac.
On Blockchain ah, hash waa wax aan ka badnayn set tiro lambarro aan rasmi ahayn oo u adeegaya matalaad yar oo xog kale ah oo cabbir kasta leh. Waxaa loo adeegsadaa in looga hortago khayaanada tiknoolajiyada la yiri. Maaddaama baloog kastaa leeyahay hash u gaar ah oo loo qoondeeyey, marka lagu daro xogta ku kaydsan iyo xashiishkii hore. Hash-ka waxaa loo adeegsadaa qaab haddii haddii waxa ku jira aagga wax laga beddelo, hash-ka xannibaaddaas ay is beddesho. Haddiise xashiish la beddelo iyadoon laga ahayn wax soo saar waxa ku jira, carqalad baa ku dhacda dhammaan baloogyada ka dambeeya.
Así Blockchain wuxuu noqdaa nooc ka mid ah tiknoolajiyadaha qaabaysan ee qaab dabiici ah loo xirayo, kaas oo siiya macmiil aamin ah oo la isku halleyn karo dadka isticmaala, aqoonsiyadooda, xogtooda iyo macaamiladooda, iyada oo aan loo baahnayn dhexdhexaadiye, iyada oo loo marayo internetka. Micnaheedu waa dammaanad qaad in wax kasta oo la qabtay ay ansax yihiin, la ansaxiyay oo aan la beddeli karin, taas oo ah, inay leedahay astaamo aan beddelmi karin.
Macdanta Dijital ah
Macdanta Dijitaalka ah badanaa waxaa loola jeedaa ficilka (hababka ama ficillada) xallinta baloogga, ansaxinta dhammaan macaamillada ay ka kooban tahay si loo helo abaalmarin celin ah. Si kale haddii loo dhigo, waa habka ay martidu (node) u xalliso howlaha cryptographic ee ka dhex socda Blockchain, taas oo inta badan abuurta astaamo, hanti kripto ama cryptocurrencies sida alaabada ugu dambeysa. Nidaamkan oo dhami wuxuu ku socdaa xawaare ay dejiyeen algorithms si fiican u saxan iyo qeexitaanno farsamo horey loo sii cayimay.
Ficilka la sheegay, asal ahaan noodhku wuxuu xaqiijinayaa macaamil ganacsi inuu ansax yahay, si aad markaa ugu xirxirto baloog ay weheliso xashiishkeeda u dhigma, ka dibna xulo haashka balooggii hore kuna dar midka hadda jira. Kadib socodsiinta algorithm isku raacsanaanta 'Blockchain' asalka ah si loo hubiyo in node uu sameeyay dadaalada lagama maarmaanka ah si loo dhameystiro baloogga loo xilsaaray loona helo abaalmarintiisa u dhiganta.
Macdanta Dijital ah, “Algorithms-ka Consensus” wax kale ma ahan waa xeerarka lagu dejinayo nuqul ka mid ah Blockchain oo ansax ah iyo mid aan sax ahayn. Xeerarkan waxaa si fudud loogu tilmaami karaa inay yihiin: "silsiladda ugu dheer ee had iyo jeer loo tixgelin doono tan ugu saxsan ayaa ah tan Blockchain ee leh aagagga ugu badan" iyo "silsiladda baloogyada leh taageerada ugu badan waxaa loo tixgelin doonaa inay ansax tahay." Kuwa badan baa jira “Algorithms of Consensus” hadda si loo cabbiro taageerada shabakadda, laakiin kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah: Cadaynta Shaqada / POW iyo Cadaynta saamiga / POS.
Marka laga reebo «algorithms Consensus», kan caanka ah ee la yaqaanQarsoodiga ama Algorithms Encryption »oo ah shaqooyin u rogaa fariinta qaab taxane ah oo aan la aqrin karin. Gudaha Blockchain kuwan waxaa loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo macaamilada. Qaar ka mid ah waa: CryptoNote, CryptoNight, Equihash, Scrypt, SHA iyo X11.
Tokens, Cryptoassets iyo cryptocurrencies
Gudaha Blockchain, Tokens-ka waxaa badanaa lagu qeexaa inay tahay calaamadda loo yaqaan 'cryptographic token' oo u taagan halbeeg qiime ah oo lagu dhex heli karo si hadhow loogu adeegsado in alaab iyo adeeg loo helo. Waxyaabaha badan dhexdooda, Token waxaa loo isticmaali karaa in lagu siiyo xuquuq, in lagu bixiyo shaqo la qabtay ama in la fuliyo, wareejinta xogta, ama dhiirigelin ama albaab laga helo adeegyada la xiriira ama hagaajinta shaqooyinka.
Halka a Cryptoactive waxaa badanaa lagu qeexaa inay tahay astaan ​​gaar ah oo la soo saaro oo lagu kala iibsado gudaha meheradda xannibaadda. Sidoo kale waxay badanaa loola jeedaa mid kasta oo ka mid ah astaamaha kala duwan ee jira (cryptocurrencies, qandaraasyo caqli badan, nidaamyada maamulka, iyo kuwa kale) iyo qaabab kale oo badeecado iyo adeegyo ah oo adeegsanaya cryptography si ay u shaqeeyaan.
Ugu dambeyntiina, Cryptocurrency waa mid ka mid ah noocyada badan ee loo yaqaan 'Cryptoasset', taas oo iyaduna, ay tahay qayb ka mid ah waxa loo yaqaan 'Digital Asset'. Halka Hantida Dijital ah loo tixgeliyo inay tahay wax ku jira qaab laba-geesood ah oo la imaanaysa xuquuqdeeda isticmaalka, in haddii aan la lahayn, looma tixgelin karo inay tahay hanti dijitaal ah. Hantida Dijital ah waxay noqon kartaa dukumiinti dijitaal ah ama feylal badan oo warbaahin ah (qoraal, maqal, muuqaal, muuqaal) oo wareegaya ama lagu keydin karo aaladda dhijitaalka ah.
Isweydaarsiga (Isdhaafsiga) Cryptocurrencies waxaa loola jeedaa websaydhyada lagu fuliyo falalka iibsashada iyo iibinta lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Kuwani caadi ahaan waxay kaloo u oggolaadaan la shaqeynta noocyada kale ee hantida sida saamiyada ama dammaanadaha dhaqaale ee ay aqbalaan xubnaha bulshada ee ka kooban.
Ujeeddada ugu weyn ee a Isweydaarsiga dhaqameed ama baahsan (DEX), waa in loo oggolaado kanaga isticmaaleyaasha (Ganacsatada) Waxay kaqeybqaadan karaan suuqa loo yaqaan 'crypto currency' si loo gaaro macaash ku saleysan kala duwanaanshaha qiimaha (qiimaha bilaashka ah) ee ka dhaca.
Intaas waxaa sii dheer, badankood badanaa dhufto ee si heer sare ah loo nidaamiyay, ee waafaqsan heerarka KYC (Ogow macmiilkaaga) y AML (La Dagaalanka Lacagta La Dhaqay). Oo iyagu badanaa adeegyadooda iyo xaqiijin qaarkood xaddidaadda raasamaalka si ay uga qayb galaan barnaamijkeeda.
Ugu dambeyntii, ka Isbedelada Baahinta (DEX) Si ka duwan sida Isweydaarsiga dhaqankaWaxay ku shaqeeyaan siyaabo aad isugu eg, hase yeeshe, kuwii hore waxay leeyihiin awood ay ugu shaqeeyaan si baahsan. taasi waa in la yiraahdo, taasi iyaga dhexdeeda ma jiraan dhexdhexaadiyayaal madalna waa mid iskeed isu sii taagaysa barnaamijkeeda awgood. Sababtaas awgeed, waxay badanaa sheegaan heerarka sare ee asturnaanta iyo xitaa aqoonsi la'aanta.
Waxaa jira waxyaabo badan oo la barto, gaar ahaan si faahfaahsan oo qoto dheer oo ku saabsan Hantida 'Crypto Assets' iyo 'Cryptocurrencies', Teknolojiyada Maaliyadeed iyo Blockchain. Laakiin asal ahaan, waxa halkaan lagu soo bandhigayaa wuxuu caalamiyeeynayaa qodobbada ugu muhiimsan ee qof walba oo aqoon ama qof aan aqoon u lahayn uu billaabo inuu baaro oo uu barto u diyaargarowga isbeddelada qaabkan cusub ee elektaroonigga ah ama lacagta dhijitaalka ah ay tilmaamayso, taas oo in yar oo yar ugu hanjabaysa inuu lacag baaba'o lacag caddaan ah iyo mas'uul, dhammaan waddammada si siman, iyo xitaa bilaaba inay la tartamaan lacagta badeecadda, sida Dahabka, Qalinka, Copper, iyo kuwa kale; oo aad ku beddesho lacagta macmalka ah ee bogagga internetka qaarkood.
Haddii aad rabto, akhri maqaallo kale oo la xiriira mawduuca ku jira barteena, waxaan kugula talineynaa qodobbada soo socda: «Crypto-Anarchism: Barnaamijka bilaashka ah iyo dhaqaalaha farsamada, mustaqbalka?»Iyo«Latin America iyo Spain: Mashaariicda Blockchain ee leh Cryptocurrencies«.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Hantida 'Crypto Assets' iyo 'Cryptocurrencies': Maxaan ogaan karnaa kahor intaan la isticmaalin?
Maqaalkani wuxuu iila muuqday mid aad ii xiiso badan, maxaa yeelay waxaa lagu muujiyey luuqad cad oo si fudud loo fahmi karo, xitaa kuwa naga mid ah oo aan aqoon farsamo u lahayn mawduuca hantida loo yaqaan 'crypto hantida' iyo 'cryptocurrencies', waxaan u arkaa inay waxtar badan leedahay in la sii wado baaritaanka aqoontaan, tan iyo markii la aqbalay ka mid ah lacagtan dalwaddu waa inay noqotaa kobcitaankeeda hadda, habka ugu nabdoon ee lagu fuliyo macaamil dhaqaale iyo maaliyadeed mustaqbalka dhow.
Jawaab Luis josé Larez
Waad salaaman tahay, Luis! Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada togan. Waxaan ku faraxsanahay in maqaalku uu waxtar badan u leeyahay dhammaan noocyada dadweynaha, gaar ahaan kuwa bilaabaya inay wax ka ogaadaan adduunkan.
runta xiiso leh
Jawaab Otto Gutman
Salaan, Hernán. Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada, waxaan rajeynayaa in aqrinta ay waxbadan kaa caawisay sidii aad ugu bilaabi laheyd lugta midig ee aqoonta aaggan muhiimka ah ee aqoonta hada jirta.